Muuqaalo Dhulgariir Gariig ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Giriigga » Muuqaalo Dhulgariir Gariig ah
Jebinta Wararka Yurub • Wararka Giriigga • News • Ammaanka • Dalxiiska • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Ciidamada Griiga ayaa teendhooyin iyo miisaska cuntada ka sameystay goob kubada cagta ah oo u dhow iyadoo saraakiisha maxalliga ah ay dadka ku boorriyeen inay ku ekaadaan banaanka guryahooda illaa laga baarayo dhulgariir 6.2 ah oo wata dhulgariirro xoog leh oo gaaraya ilaa 5.2 magnitude.
Kumanaan qof ayaa ka baqay inay dib ugu laabtaan guryahooda oo ku yaal bartamaha Giriigga waxayna xalay ku hoydeen bannaanka xilli dambe oo Arbacadii ah.
Dhulgariirku wuxuu lahaa qoto dheer oo kaliya 8 kiiloomitir (5 mayl) waana mid kamid ah sababihii sida aadka ah looga dareemay gobolka.
Dhul gariirku wuxuu ka yimid khadka cilad ee aagga taariikhiyan soo saarin duufaano aad u baaxad weyn.
Dhulgariir xoog leh oo cabirkiisu yahay 6.2 magnitude ayaa ku dhuftay gobolka Larissa ee bartamaha Griiga Arbacadii, kaasoo waxyeeleeyay guryaha iyo gawaarida isla markaana diray dadka ka cararaya guryahooda.
Dhul gariirku wuxuu dhacay 12:16 pm (1015 GMT), sida laga soo xigtay machadka Athens Geodynamic, sidoo kale waxaa laga dareemay deriska Albania iyo Waqooyiga Macedonia, iyo ilaa waqooyiga ilaa Kosovo iyo Montenegro.
Kumanaan qof ayaa ka baqay inay dib ugu laabtaan guryahooda oo ku yaal bartamaha Giriigga waxayna xalay ku hoydeen bannaanka Arbacadii dhulgariirkii xoogga badnaa, Dhulgariirkii yaraa ee 6.2 ayaa ku dhuftay meel u dhow bartamaha magaalada Larissa waxaana laga dareemay gobolka oo dhan, isagoo waxyeello u geysanaya guryaha iyo dhismayaasha dadweynaha. Hal nin ayaa ku dhaawacmay burburka daadanaya laakiin lama soo sheegin dhaawacyo halis ah.
Saraakiisha ayaa ka warbixiyay burburka dhisme ee iskuul hoose dhexe marka lagu daro guryo, oo dhagax la dhisay 1938, tuulada uu ku dhuftay dhulgariirka ee Damasi halkaas oo ay dhiganayeen 63 arday.
1 of 24Red Cross waxay uqeybisaa dadka deegaanka maxali kadib dhul gariir kadhacay tuulada Damasi, bartamaha Griiga, Arbaco, Maarso 3, 2021. , iyo ilaa Kosovo iyo Montenegro. (AP Sawir / Vaggelis Kousioras)
ATHENS, Greece (AP) - Waxay ka baqayaan inay ku noqdaan guryahooda, kumanaan dad ah oo ku nool bartamaha Giriigga ayaa xalay ku hoyday banaanka Arbacadii kadib dhulgariir xoog badan, oo laga dareemay gobolka oo dhan, waxyeeleeyay guryaha iyo dhismayaasha dadweynaha.
Dhulgariirkan hoose, cabirkiisa-6.0 ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada bartamaha ee Larissa. Hal nin ayaa ku dhaawacmay burburka daadanaya laakiin lama soo sheegin dhaawacyo halis ah.
Saraakiisha ayaa ka warbixiyay burburka dhismaha, gaar ahaan guryihii hore iyo dhismayaashii arkay derbiyada oo dumay ama dillaacay. Midkood wuxuu ahaa dugsi hoose, dhagax la dhisay 1938, tuulada uu ku dhuftay dhulgariirka ee Damasi halkaas oo ay dhiganayeen 63 arday. Qof walba wuu soo baxay okay, laakiin dhismaha waa la cambaareyn doonaa.
Ciidanka ayaa teendhooyin iyo miisaska cuntada ka sameystay goob kubada cagta ah oo u dhow iyadoo saraakiisha maxalliga ah ay dadka ku boorriyeen inay banaanka ka joogaan guryahooda ilaa laga baarayo. Dhulgariirro taxane ah oo xoog leh oo gaaraya illaa 5.2 magnitude ayaa dad badan oo deggan ku hareeray.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa taleefan u diray dhigiisa Giriigga, Nikos Dendias, si uu ugu gudbiyo isgarab istaag iyo u fidinta gargaar haddii loo baahdo, sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan labada dal ee deriska ah - oo muddo dheer xifaaltan ka dhexeeyey gobolka.
Wasiirka arimaha dibada ee Albania, Olta Xhacka, ayaa sidoo kale wacday Dendias si ay taageero ugu muujiso.
Athens, Vassilis Karastathis oo ku xeel dheer cilmiga dhul gariirka ayaa u sheegay wariyeyaasha in dhul gariirku uu ka dhashay cillad dhanka aagga ah oo taariikh ahaan aan soo saarin duufaano aad uga baaxad weyn kii Arbacadii. Wuxuu sheegay in dhaqdhaqaaqa dhulgariirku u muuqday mid caadi ah illaa iyo hadda laakiin khubarada ay kormeerayaan xaaladda.
"Dhulgariirku wuxuu lahaa qoto dheer oo kaliya 8 kiiloomitir (5 mayl) waana mid kamid ah sababihii sida aadka ah looga dareemay gobolka," ayuu yiri Karastathis, oo ah ku xigeenka agaasimaha machadka Athens Geodynamic.